Zinedine Zidan oo ka hadlay laacibka reer Weles ee Gareth Bale kahor kulanka Madrid Derby – Gool FM
Zinedine Zidan oo ka hadlay laacibka reer Weles ee Gareth Bale kahor kulanka Madrid Derby
Dajiye January 31, 2020
(Madrid) 31 Jan 2020. Tababaraha reer France iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidan ayaa ka hadlay kulanka la wada sugayo ee Madrid Derby oo ay maqribka barri la ciyaari doonaan kooxda Atlético Madrid.
Dhinaca kale Zinedine Zidan ayaa iska diiday wararka xanta ah ee sheegaya in Gareth Bale uu ka tagayo garoonka Santiago Bernabéu.
Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa kooxda Real Madrid ayaa waxay Maqribka barri ku soo dhaweyn doonaan naadiga ay darista yihiin ee Atlético Madrid garoonka Santiago Bernabéu si ay u wada ciyaaraan kulanka Madrid Derby ee qeyb ka ah kulmada 22-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Haddaba Zidane oo kasoo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ugu horeyntii ka hadlay mustaqbalka Gareth Bale ee kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Gareth Bale wuu nala jiraa, kuma fikirayo inuu baxayo, waan ku tiirsanahay isaga”.
Intaas kaddib Zinedine Zidan ayaa waxaa wax laga weydiiyay haddii uu Bale qeyb ka noqon doono kulanka Madrid Derby wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaan heystaa 25 ciyaaryahan, waxa ugu fiican ayaa ah in dhamaantood ay diyaar noqon doonaan oo ay dadaali doonaan inta ay awoodaan haddii ay fursad helaan”.
“Waxaan ahay shaqsiga kala dooqan doona ciyaartoyda, sababtoo ah waxaan ahay macalinka kooxda, maadaama ay jiraan 25 ciyaartoy, way adagtahay in la xusho 18 ka mid ah, waxa kaliya ee aan doonayo ayaa ah in qof walba uu diirada saaro”.
RASMI: Xiddig ka tirsan Manchester City oo ku biiray Koox ka dhisan dalka Jarmalka
Ángel Di María oo isbar-bardhig ku sameeyay xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi